बुवाको हातको मायालु स्पर्श सधैं सम्झिरहन्छु : राजेश हमाल
धेरैले आमालाई धर्तीसँग तुलना गरे । आमाको त्यागको व्याख्या गरे । आमाको ममताका बारेमा लेखे । तर, बुवाभित्र पनि मायाको विशाल खानी हुन्छ भन्ने कुरा कमैले मात्र महसुस गरेका छन् ।
आमालाई धर्ती भन्दै गर्दा बुवाभित्रको आकाशजस्तै विशाल छाती किन नियाल्न सकेनन् होला कवि, कथाकारले ? यो कुरा नायक राजेश हमाल आज पनि सोचिरहन्छन् ।
धेरै बुवाहरुको स्वभाव कर्तव्य पूरा गर्ने, चुपचाप माया गर्ने, माया नदेखाउने खालको हुन्छ । राजेशका बुवा चुडाबहादुर हमाल भने आफ्ना सन्तानप्रतिको माया देखाउने स्वभावका थिए । उनी स्पर्श गरेर माया दर्शाउँथे । आफ्ना बुवाको सम्झना गर्दा आज पनि राजेशलाई शरीरभरि बुवाको हातको मायालु स्पर्श सम्झना आउँछ ।
पाँच सन्तान, चुडाबहादुरले आफ्नै वरिपरि राखेर हुर्काए । राजेशका बुवाको सबै सन्तानसँग निकै आत्मीय सम्बन्ध थियो । आफ्ना छोराछोरी लिएर घुम्न र फिल्म हेर्न निस्कन निकै रमाइलो मान्थे राजेशका बुवा । कहिलेकाहीँ पाँचजनालाई एकै पटक लिएर निस्कन गाह्रो हुन्थ्यो । आफ्नो पालो नपर्दा पनि राजेशलाई भने घुम्न जानै पर्ने । अझै आमा जाने थाहा पाए भने उनी बिहानैबाट लुगा लगाएर तयार भएर बस्थे ।
तस्बिर : अर्जुन तामाङ
बुवाले छोडे पनि आमाले छोड्नै हुँदैनथ्यो उनलाई । आमा कतै निस्कने चाल पाएपछि बाहिरै कुरेर बस्थे । आमा निस्कनासाथ पछि लाग्थे । एक दिनको कुरा हो, उनले आमा कतै घुम्न निस्कने चाल पाए । बिहानैबाट लुगा लगाएर तयार भएर बसेका थिए । उनकी आमाले अर्कोपट्टिबाट छलेर बाहिर निस्किन् ।
थाहा पाएपछि उनले घरमा सानोतिनो रडाँको नै मच्चाइदिए । कुराकानीका क्रममा राजेशले आफ्नो हातको खत देखाउँदै भने, ‘त्यही बेला आमाको दराजको सिसा फुटाएको चोटको खत हो यो ।’ आज उनका बाबु–आमा भौतिक रुपमा धर्तीमा छैनन् । उनी सम्झनामा बाबु–आमाको न्यास्रो मेटिरहेका हुन्छन् ।
राजेशका बुवा चाहन्थे– छोरो स्थापित पेशामा लागोस् । सेना, पाइलट, डाक्टर, वकिल जे हुँदा पनि उनका बुवालाई समस्या थिएन । समस्या थियो– कलाकारितामा । तर, छोराले त्यही क्षेत्र रोज्दा बाबु–छोराको सम्बन्धमै दरार पैदा भयो । गीत–संगीत मन पराउने, गीतका क्यासेट किनेर ल्याउने, फिल्म हेर्न रुचाउने, छोराछोरीलाई लिएर जाने उनका बुवाले कलाकारितामा छोराको भविष्य देखेनन् । नदेख्नु स्वाभाविकै थियो ।
त्यतिबेला नेपाली भाषामा वर्षभरिमा एउटा फिल्म बन्न पनि मुस्किल थियो । फिल्मी क्षेत्रमा करिअर बनाएर कहाँ पुगिन्छ भन्ने टुंगो थिएन । यो क्षेत्रमा भविष्य खोज्नु नै मुर्खता मानिन्थ्यो । त्यही अन्योलका बीच फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका राजेशको यात्रालाई लिएर उनका बुवा खुसी हुन सकेनन् । स्पर्श गर्दै हुर्काएका बुवासँग राजेशको मनमुटाव नै भयो । बोलचाल पातलियो । बुवा खुसी नभएपछि आमाको मन पनि छोराप्रति खुम्चियो ।
नेपाली फिल्म उद्योग विस्तार भएकै थिएन । विस्तार नभएको मात्र कहाँ हो र, व्यवस्थित पनि नभएको क्षेत्रमा होमिएको छोराको भविष्य के होला ? उनका बुवालाई चिन्ता थियो, ‘छोरालाई देश–विदेश घुमाएँ, पढाएँ । आखिरमा यस्तो पेसामा लाग्दैछ जसको भविष्य पनि छैन । वर्तमान पनि छैन । राजेशले हामीले भनेको मान्दैन ।’ बुवाको गुनासो सुनाउँदै गर्दा राजेशका आँखा रसिला भए । अनुहार मलिनो भयो । एकैछिन मौन भए ।
मनको इच्छा छोड्न पनि सकेनन् । बुवाको मन बुझाउन पनि सकेनन् । आफ्नो सपनाका लागि राजेशले बाबुसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखे । भविष्य कस्तो होला भनेर उदाहरण दिने कोही नभएको क्षेत्रमा पाइला चाले ।
उनलाई त्यसबेला लाग्यो– ‘म भोलिको पुस्ताका लागि उदाहरण बन्न सक्छु । तर, आफूलाई मन लाग्ने केही नगरे जीवनको एउटा बिन्दुमा गएर पछुताउनु पर्छ । त्यो पश्चात्ताप गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन ।’ करिअरको सुरुवातमा नपाएको बुवाको साथ, हौसला र शीरमाथि पर्न नपाएको त्यो हातको स्पर्श सम्झँदा अहिले पनि अमिलो हुन्छ उनको मन ।
तस्बिर साैजन्य : राजेश हमाल
बुवा दरिलो अभिभावक । जिन्दगीकै सबैभन्दा बलियो भर लाग्थ्यो उनलाई बुवाको हातको । चाहन्थे आफ्ना पिताले आफूले हिँडेको बाटोमा मार्गनिर्देशक भएर साथ दिउन् । भावना वा आत्मविश्वास दिने मान्छे बुवा हुन् भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । तर, उनका बुवालाई उनको फिल्मी करिअरलाई लिएर कुनै वास्ता थिएन । उनी कुन फिल्मको छायांकन गर्छन् ? कामको सिलसिलामा कहाँ कहाँ पुग्छन् ? छायांकनका क्रममा कत्तिको गाह्रो–सजिलो भएको छ ? उनका पिताले कहिल्यै प्रश्न पनि गरेनन् । बुवाको जीवनकालमा उनका तीनवटा फिल्म रिलिज भैसकेका थिए । तर, कहीँ पनि बुवाको साथ र हौसला पाएनन् ।
राजेशलाई लागेको थियो, ‘मेरो भावना राम्रो छ । बुवाप्रतिको सम्मान उस्तै छ । बुवाले पनि आफूले चाहेको जस्तो नहुँदा चित्त दुखाएर नबोलेका हुन् । एक दिन म सफल हुने छु । बुवाले न्यानो अँगालोमा बाँधेर भन्नेछन्– स्याबास छोरा ।’
तर, उनको जीवनमा त्यो दिन आउनुअघि नै बुवाको आयु सकियो । ५६ वर्षको उमेरमा पाकिस्तानमा उनका बुवाको मृत्यु भयो । बुवाको मृत्युको खबर आउँदा उनी चौथो फिल्म छायांकनका क्रममा थिए । बुवाको निधनले उनको दिमाग र हृदयमा लामो समय चोट पु¥यायो । झन् बुवा बितेपछि उडेको आमाको अनुहारको रंग सम्झिँदा अहिले पनि मुटु गाँठो पर्छ राजेशको ।
बुवाको मृत्युसँगै धेरै कुरा अधूरै रहे उनको जीवनमा । उनका बुवाको त्यतिबेला पाकिस्तान सरुवा भएको थियो । सरुवा भएर पाकिस्तान पुगेको एक महिना नबित्दै बुवाको मृत्यु भयो । ‘पाकिस्तान जाँदा मलाई बाई पनि भन्नुभएन । भेट्नु पनि भएन । मैले पनि बुवालाई गुड बाई भन्न पाइनँ । मलाई लागेको थियो– फिल्म गर्दै गएपछि एकदिन सफल हुन्छु अनि त सम्बन्ध सुध्रिहाल्छ । आखिर उहाँहरु मेरो सफलता चाहनुहुन्थ्यो । तर, बुवालाई मेरो सफलता देखाउनै पाइन ।’
बुवा सम्झदा आज पनि राजेशलाई लाग्छ– ‘मेरो बुवाले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु भएको भए त्यति छिट्टै त्यो साथ छुट्दैनथ्यो ।’
उनका बुवा अम्मली नभए पनि पार्टी तथा बैठकमा रक्सी पिउँथे । खानपान पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । आफ्नो शरीरको सुरक्षाका बारेमा चासो राख्दैनथे । ३० को दशकबाटै प्रेसरको रोगी भए । शारीरिक रुपमा अस्वस्थ हुन पुगे । त्यही प्रेसरकै कारण हृदयघात भएर उनका बुवाको मृत्यु भयो ।
राजेशको बुवाप्रति त्यही एउटा गुनासो रह्यो । अन्यथा, उनी आफ्ना पिताका थुप्रै सकारात्मक कुरा सम्झना गर्छन् । आफ्नो कार्यमा अब्बल आफ्ना पिता सफल कूटनीतिज्ञ हुन् भन्ने लाग्छ राजेशलाई । सबैलाई समान व्यबहार गर्ने बुवाको बानीबाट निकै प्रभावित छन् उनी । पछाडि फर्किएर हेर्दा आफैंले पनि आफ्ना पितासँग माफी नमागेकोमा पछुतो छ राजेशलाई ।
भन्छन्, ‘जुन बेला बुवासँग मेरो बोलचाल बन्द भयो, त्यो समय मबाट पनि केही आशा गर्नु भएको थियो कि बुवाले ! कहिल्यै भन्नु त भएन । तर, बुवा सरी म हजुरले चाहेको जस्तो बन्न सकिनँ । मलाई यही क्षेत्र मन पर्‍यो । यसमै केही गर्न मन छ भन्न पाएको भए बुवासँगको त्यो दूरी रहँदैनथ्यो कि !’ उनलाई त्यसबेला लागेको थियो– ‘बुवा अभिभावक हो । उहाँले मलाई मार्गनिर्देशन दिनु पर्छ ।’
बुवाको मृत्युपछि भावनात्मक रुपमा हमाल निकै विक्षिप्त बन्न पुगे । उनको त्यो विक्षिप्तिता बुवाको मृत्युको भन्दा धेरै बुवासँगको अधूरो सम्बन्धका कारण उत्पन्न भएको थियो । उनी अहिले अरुलाई सुझाव दिन्छन्– ‘बुवासँग मनमुटाव भए पनि सम्बन्धको आत्मीयता प्रकट गर्नु पर्दोरहेछ । प्रकट गर्नका लागि संवाद हुनु जरुरी छ । जस्तो परिस्थिति आए पनि आफ्ना अभिभावकसँग संवाद बन्द नगर्नु पर्ने रहेछ ।
संवादले मनमा भएको तीतोपना बाहिर निकाल्छ । र, सम्बन्धमा मिठास फर्किन्छ । मैले मेरो मनको तीतो पोख्न सकिनँ । बुवाले उहाँको मनको तीतो पोख्न सक्नु भएन र हाम्रो सम्बन्ध अधूरै रह्यो । यस्तै गल्तीले अरु कसैको पितासँगको सम्बन्ध अधूरो नहोस् ।’
प्रकाशित मिति : भदौ २२, २०७८ मंगलबार १२:१८:१२, अन्तिम अपडेट : भदौ २२, २०७८ मंगलबार १२:५८:२०